Lakkoofsa manaa fi ummataa marsaa 4ffaaf qophiin xumuramaa jira – Fana Broadcasting Corporate
Lakkoofsa manaa fi ummataa marsaa 4ffaaf qophiin xumuramaa jira
Finfinnee, Gurraandhala 8,2011(FBC)- Lakkoofsa manaa fi ummataa marsaa 4ffaa barana gaggeeffamuuf qophiin duraa xumuramaa jira jedhe Koomiishiniin Lakkoofsa Ummataa fi Manneenii.
Koomiishinichatti Koomiishiniin Damee Oromiyaa, lakkaawwicha akka naannoo Oromiyaatti odeeffannoo gahaa ummata biraan gahuu fi faayidaa ummaataaf qaburratti hubannoo akka uumaniif, koominikeeshinoota godinaalee, aanaalee fi magaalota damee bahaa akkasumas ogeeyyota miidiyaaf leenjii hubannoo uumuu magaalaa Adaamaatti kenneera.
Ragaan koomiishinicharraa argame akka muul’isutti namootni kuma 145 lakkaawwirratti hirmaatu, namoonni kuma 48 ammoo supparviizhiniin hirmaatu.
Lakkoofsa ummataa fi manaa Bitooteessa 30 hanga Ebla 20,2011 guutuu biyyaatti gaggeeffama.
Lakkoofsi ummataa fi manaa karaa sirrii ta’een lakkaawamee, tajaajila hawaas-diinagdee sirrii kennuuf, bu’uuraalee misoomaa fedhiin walisimu dhiheessuu fi imaammatawwan ummata fayyadan baasuuf ga’ee olaanaa qaba jedhame.
Akka ragaan Eejansii Istaatistiiksii Giddugaleessaa muul’isutti, lakkoofsi ummataa sadarkaa biyyaatti jalqaba bara 1976, yeroo 2ffaaf bara 1987,3ffaan ammoo bara 1999 kan lakkawame yoo ta’u, inni bara 2011 kun ammoo yeroo 4ffaafi.
Lakkoofsichi ragaa dhugaa ta’een akka milkaa’uf hawaasni lakkaa’amus ta’e qaamoleen lakkaawwiirratti hirmaatanii fi tumsa taasisan ga’eesaanii akka ba’an barreessaan koomiishinichaa damee naannoo Oromiyaa obbo Sheekoo Guuru imaanaa jedhaniiru.
Lakkaawwii ummataa fi manaa bara kanaarratti barsiisotni, hojjatoonni, ekisteenshinii fayyaa fi hojjattoonni dirree misooma qonnaatu lakkawa jedhameera.
Raggaasaa Firoomsaatu gabaase.